Guul Wadeen Mise Golle Ka Fuul Nacasnimo "Markuu Damiirku Kaa Dhinto Wax kasta waad ku Hadli"
Tuesday September 10, 2019 - 14:33:21 in Articles by Hadhwanaag News
Waxa ayaan daro in xilibaankii u liitey ee ka soo baxay caasimada kana soo jeeda degmada
ahmed dhagax iyo 31may uu bulsho la hagraday ka raali geliyo cidii hagratay una guulwadeeyo maayirka fadhiidka ah ee tuugnimada iyo dhicida budhcadnimo lunsiga , ku tagri falka hantida umada uu yidhaah waan idiinka raali gelinaya meel aanu taageero isagii u dhashayba ku haysan looguna neceb yahay marka loo barar dhigo kuwa kale ee la mid ah.
(Dhaameel ha lagu lulo waxa dhaanta magac dhimo)
Waxaan aad uga xumahay Xilibaan Mubaarik Abdi Malow oo degmada Axmed Dhegax looga yaqaano Dameer Qadiye inuu nacamlayn indho la’aan ah la so fadhiisto Tv ga uguna guul wadeeyo Maayir Soltelkaha khasaaraha ah ee aan haysan degmo ama xaafada uu taagero ku leyahay madaama ay Golahan deeganku lumiyeen waxii lagu soo doortay oo ah bilicda iyo waddooyinka Casimada taaso maanta la mooodo kutaafad Casimadii Waddanka Somaliland ee Hargeisa ha ugu sii darnaato xaafada uu ka soo jeedo Mubarik Abdi Malow.
Runtii Abdi Faarax Caateeye AUN oo aha Aabihii waxa uu aha shaqsi karti iyo raganimo Alle ku manaystay lkin Mubaarik dhinacna kamu raacin (Dabaa Danbas Dhala) waana (Dameer Qadiye) aan dhinacna ku fiicnayn.
Waxa been cadaan ah inu yidhaah waxaan kulanay aqoon yahanka iyo dhalinyarad reer Ahmed Dhagax hal maalin lamu kulmin aniga xogtaa haya wlhi Kaman wada hadal arimaha maayirka iyo wax la mid ahba.
Tolkii, Qoyskiisa, iyo Deeganku kaso jeedo ee laga soo doortay midna abaal muu gashan waana inan yar oo 40 jir dadiisu gaadhin mustaqbal danbena u hadhsan yahay lakin geedna tiir la’aan ma baxo xilibaan mubaarik waa nin aan abidkii waxba loo diran doonin.
Dhawr iyo sodon jir bu ku lumiyey dhamaan noloshiisi kale oo dhan.
Qoyskiisi ninka Maamuli kari waayey ee caruurtiisu kala quban tahay ma waxa uu wax ka tarayaa bulsho dhan oo shaqo ka sugaysa inu u qabto.
Ma jiro dadkii soo saaray cid abaal u hal maalin u galay iyagaabu ugu neceb yahay. Anu aqoon buuxda u leeyahy dadka ugu dhawna wan ka mid ahaa lakiin damiirkaygu inaan wax u qariyo wuu I siin waayey.
Xilibaanada 25 ah ee deegaanku maanta bulshadeena uma dhaaman Sidii dad ka dhintay oo la aasay wax qabadna ka filan mayno ha inaga joojiyaan guul wadeynta inta yar lagu soo siiyey ee Tv ga indho la’aanta la so fadhiisanayaan caqligodana ha ka shaqaysiiyan aqoonn darada waxaas ku sababayse.
Kuwaasu ugu sii caqli liita Xilibaann Mubarik Abdi Malow (Mr Dameer Qadiye).
Waa maqaal taxane aan ka dhigi doono kuna saabsanaan doona damiir xumada iyo shaqsiyada Xil: Mubarik.